ဂျပန်က အစင်းရေ ၁၀၀ ကျော်မှာယူထားသည့် အမေရိကန် F-35 တိုက်လေယာဉ် နှင့် ပြိုင်ဘက်များ - Zet Star
ဂျပန်က အစင်းရေ ၁၀၀ ကျော်မှာယူထားသည့် အမေရိကန် F-35 တိုက်လေယာဉ် နှင့် ပြိုင်ဘက်များ
August 30, 2020 ZCC News	0 Comments
F-35 lightning2အား အာရှတွင် ဂျပန်သာမက တောင်ကိုရီးယား နှင့် စင်္ကာပူကပါဝယ်ယူမည် ဖြစ်သည်။ ဂျပန်သည် F-35 အစင်းရေ ၁၀၀ ကျော်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၁၅ စင်းခန့် ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
“F-35 တိုက်လေယာဉ် နှင့် ပြိုင်ဘက်များ”
ပြီးခဲ့သော ၃ နှစ် ၄ နှစ်တုန်းက F-35 လေယာဉ်သည် ပြသနာများစွာရှိခဲ့၏။ ပြဿနာအများအပြားကြုံရပြီး ပြင်ဆင်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအချိန်များနောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာများပြေလည်လာပြီး အကောင်းဘက်သို့ဦးတည်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ အမေရိကန်သည် နေတိုးနိုင်ငံများအတွက် F-35 အစင်းရေ ၄၇၈ စင်းထုတ်လုပ်ပေးရန် ကွန်ထရက် ရရှိခဲ့သည်။ တန်ကြေးငွေစုစုပေါင်း ၃၄ ဘီလီယံ ပမာဏ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံး ကွန်ထရက်ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ F-35 လေယာဉ်တစ်စင်းလျှင် ဒေါ်လာ ၈၀ မီလီယံတန်ကြေး ရှိသည်။
ယခုအခါ F-35 သည် အောင်မြင်မှုရရှိလာပြီး ရှရှားနှင့်တရုတ်ကမူ 5th generation Fighter အားထုတ်လုပ်ရန် ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။
Lockheed Martin ၏ F-35 lightning2သည်တစ်ယောက်မောင်း ၊အင်ဂျင်တစ်လုံးတပ် ရာသီဥတုမရွေးမောင်းနှင်းသည့် ဘက်စုံသုံး Stealth တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ပင်တကွန်သည် F-35 အား ၂၀၀၁ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပြီး F15၊F16 နှင့် F18 တိုက်လေယာဉ်များအားအစားထိုးရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ F-35 တွင် မျိုးကွဲသုံးမျိုးရှိသည်။
သာမန်လေတပ်အတွက် ထုတ်လုပ်သည့် F-35A၊ ပြေးလမ်းမလိုဒေါင်လိုက်အတက်အဆင်းလုပ်နိုင်သည့် F-35B၊ လေယဉ်တင်သဘောင်္များအတွက်ရည်ရွယ်သည့် F-35C ဟူ၍ဖြစ်သည်။ F-35 တိုက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ် ရန် အင်္ဂလန်၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ ကနေဒါ၊ တူရကီ (ယခုအထုတ်ခံရ)၊ သြစတြေးလီးယား ၊ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ် နိုင်ငံများမှလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ဂျပန်နှင့် အစ္စရေးကလည်း F-35 အားဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိပြီး F-35 အားသဘောကျလျက်ရှိသည်။ အစ္စရေးသည်လည်း F-35 များအား အသုံးပြုကာ စစ်ဆင်ရေးများအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထက်ပါနိုင်ငံများသည် ၂၀၃၅ ခုနစ်မတိုင်ခင်ထိ မိမိတို့ လေတပ်တွင်စုစုပေါင်း F-35 အစင်းရေ ၂ ထောင်ကျော် ထားရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်က F-35A တိုက်လေယာဉ်အားတိုက်ပွဲတွင် အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟု ကြေညာခဲ့သည်။ F-35 လေယာဉ်များအား ၂၀၅၀ ခုနှစ်ထိအသုံးပြုရန် လျာထားသည်။ F-35 သည်လည်း ဝယ်ယူသူများပြားသဖြင့် စျေးအနည်းငယ်လျော့ကာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
တစ်ဖက်တွင် ရှရှား သည်မိမိတို့၏ SU-57 လေယာဉ်များအား ၂၀၂၀ တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကရင်မလင် က ၂၀၂၈ မှ လေတပ်တွင် တပ်ဆင်ပေးမည်ဟု ပြန်လည်ကြေညာခဲ့သည်။ SU-57 ပရောဂျက်သည် အိန္တိယမှ တစိတ်တပိုင်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော ပရောဂျက်လည်းဖြစ်သည်။
ပရောဂျက်အောင်မြင်ပါက အိန္တိယသည် SU-57 အစင်းရေ ၁၅၀ ခန့်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၈ အေပရယ်လ တွင် အိန္တိယသည် SU-57 ပရောဂျက်မှ ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်သွားသည်။
အိန္တိယ က SU-57 သည် အင်ဂျင်ပြသနာများနှင့် Stealth ဒီဇိုင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်များစွာ ရှိသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိတွင်လည်း Su-57 တွင် အင်ဂျင်ပြဿနာများရှိနေသည်။
Su-57 သည်မူလတွင် Flanker များတွင်သုံးသော Saturn AL-31F အင်ဂျင်များသာအသုံးပြုထားသည်။တကယ်တမ်းတွင် SU-57 အတွက် သုံးရမည့်အင်ဂျင်မှာ AL-41F1 အင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် AL41F1 အင်ဂျင်များသည်ပြသနာရှိပြီး လိုအပ်သည့် အမြင့်ပေထိ မတက်နိုင်ချေ။တစ်ဖက်တွင် SU-57 သည် 5th generation fighter တွင်ပြည့်စုံရမည့် Stealth ပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များကြုံနေရပြန်သည်။ အိန္တိယ ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရလေယာဉ် ၏ အခြေခံ ကိုယ်ထည်မှာကတည်းက လိုအပ်ချက်များရှိနေသဖြင့် နောက်ထပ်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်သည့်တိုင် မပြည့်စုံနိုင်ဟုဆိုသည်။ အခြားအချက်များကို တိတိကျကျမပြောနိုင်သော်လည်း SU-57 အား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အဓိကပြောသည့်နှစ်ချက်ရှိသည်။
၁. လေယာဉ်၏ နောက် Flap ၊ Vertical Tail နှင့် ကိုယ်ထည်ကြားတွင် လွတ်နေသည့် နေရာအလွန်ကျယ်သည်။ ထိုအရာသည် Stealth စွမ်းရည်အားသိသိသာသာ လျော့ကျစေသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
၂. SU-57 လေယာဉ်သည် F35 ကဲ့သို့စင်းလုံးချောမဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြင်တွင် ရက်ပစ် အရာများရှိသည်။အထူးသဖြင့် လေယာဉ်၏ နှာဖျားကို Body ဖြင့် Rivet ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသို့ မညီမညာ မျက်နှာပြင်များသည် Stealth စွမ်းအင်အားများစွာလျော့ကျစေသည်။
တရုတ် သည် ယခုအခါ J20 တိုက်လေယာဉ် ၂၈ စင်းသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ထားသည်။ Su-57 ကဲ့သို့ပင် J20 သည်လည်း အင်ဂျင်ပြသနာမျာရှိသည်။ တရုတ်သည်လည်း Flanker လေယာဉ်မှ ကူးချထားသော WS 10 အင်ဂျင်အားပြည့်စုံအောင် မလုပ်နိုင်သေးပေ။ WS10 အင်ဂျင်သည် လုံလောက်သောစွမ်းအင် မပေးနိုင်သဖြင့် တရုတ်အတွက် ခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေခဲ့သည်။နောက်ထပ် ထုတ်သည့် WS15 အင်ဂျင်မှာလည်း မြေပြင်စမ်းသပ်အဆင့်ပင်ရှိသေးသည်။ WS15 အင်ဂျင်မရသေးသ၍ J20 သည် Supersonic Speed ဖြင့် ပျံသန်းရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။
ယခု အခါ တရုတ်သည် Flanker မှ ရှရှားထုတ် AL31F အင်ဂျင်များကိုသာ J20 တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ တရုတ်သည် ပြသနာပြေလည်လိုပြေလည်ငြား မကြာသေးမီက ရှရှားထံမှ Su35 လေယာဉ်အားဝယ်ယူခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် SU-35တွင် တပ်ထားသော AL-41F1S အင်ဂျင်အားလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် AL41 အင်ဂျင် စီးရီးများသည် 5th generation တိုက်လေယာဉ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အပြင် ရှရှားကိုယ်တိုင်က အစားထိုးရန်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ SU-57 ကဲ့သို့ J20 သည်လည်း Stealth ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးသည်။ J20 လေယာဉ်များ တိဘက်ဒေသတွင် လေ့ကျင့်နေစဉ် အိန္တိယလေတပ်၏ SU30 MKI များသည် J20 များအား ယင်းတို့၏ ရေဒါတွင်ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း အိန္တိယလေတပ်မှ ဗိုလ်မှုး Arup Shaha မှ တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Nyan Lin Htun
← ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပျံသန်းနိုင်သည့်ကားကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသ
အကြောက်တရားဖြင့် အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဏာရှင် ပူတင် ကြောက်နေသည့်အရာနှင့် နောက်ဆုံး လားရာလမ်း →